Forum serasera malagasy sainam pirenena malagasy - Dinika forum.serasera.org
sainam pirenena malagasy
Fitohizan'ny hafatra : sainam pirenena malagasy
ora - 16/06/2014 14:45
@ zao ankatokin fetim-pirenena isika malagasy izao, satria ny fananana ny saina no marikin'ny fiandrianan'ny firenena anakiray dia mba te hanontany anareo aho hoe ahoan ny tena mikasika io sainam-pirenenantsika io, ny lokony aloha dia misy telo haintsika rehetra izany fa ny fomba fanononana ny loko no samy manana ny azy: fony izahay nianatra tany an-tsekoly dia izao no nampianarina anay: MAITSO FOTSY MENA, fe ankehitrio misy miteny hoe: FOTSY MENA MAITSO, eo aloha dia hita fa tsy mitovy ny fomba fanononantsika gasy azy, ny haben'ilay saina izay tokony ahofahofa eny amin'ny tranontsika koa rehefa vanipotoana tahaka izao dia samy manana izay mahafinaritra ny sainy, misy tena ngezabe, misy kely dia kely, misy manana maromaro mihitsy eo amin trano anakiray, sao dia tokony omen fitondrampanjakana consigne manokana mihitsy ny vahoaka e
vazivazo - 19/06/2014 12:47
Maintso Fotsy Mena no fanononana azy io taloha tamin'ny andron'ingahy Deba fa taty aoriana dia niova ho FOTSY MENA MAINTSO satria izay no tao anatin'ny fampiofanana ireto mpampianatra isakin'ny fotoan'ny fialan-tsasatra, tsy voafaritra mazava ny fotoana namoahana izay fanonoana vaovao io fa na i FRANCIS Turbo aza tao amin'ny fahita-lavitra dia nanamafy izay koa, ny antony hono dia satria rehefa mamaky soratra na manoratra dia avy aty ankavia no mandeha miankavanana, dia natao arak'izay koa ny fomba fanononana ny sainantsika
endriny - 20/06/2014 06:43
Ka raha izay fanononana fotsiny ve moa hampaninona. Fa raha izay dia tokony hovaina volana marsa ihany koa ny fahaleovan-tena satria volana marsa 1959 no nosoniavina sy natolotra ny fahaleovantena Malagasy. Fa ny Jiona 1960 dia ny famindrana ny fahefa-miaramila fotsiny. Sa diso aho?
hery - 20/06/2014 14:20
Mila fantarina ihany hoe inona no antony nanononana ny saina ho Maitso fotsy mena.
Tsy resaka alphabet aloha satria Fotsy Maitso Mena no manaraka alfabeta
Ka sao ara dia avy any amin'ny hakavanana miankavia dia avy eo miakatra no tena fanonona malagasy?
endriny - 23/08/2014 08:54
Efa nanontany olona lehibe aho, fa ny antony amakiana ny saina hoe Maitso, Fotsy, Mena sy ny tsy mampifanaraka an'io amin'ny firindran'ny loko eo amin'ny sainy dia izao no nolazaina ahy:
Ny lokon'ny saina no nosafidiana voalohany ka natao hifandrindra tamin'ny hoe fanantenana, fahadiovana ary ny martiora. Ka tamin'ireo dia nalefa aloha ny fanantenana satria dia mavesa-danja noho ny fahadioavana izy. Ny loko mena fahatsiarovana ireo martiora maty no natao farany satria raha tsy ireo tsy azo ny fahaleovantena. Ka io izany no mavesa-danja indrindra tamin'ny fahazoana ny fahaleovantena. Dia ireo no nahatonga ny fiantsoana hoe Maitso Fotsy Mena.
Rehefa natao indray anefa ny fifaninana ireo sary saina vita tamin'ireo loko telo maitso fotsy mena ireo, dia io saina hitantsika ankehitriny io no nahazo ny loka, izay misarin'ny tokotelo, sy ny fizarana tsy misy avakavaka satria natao nitovy daholo ny refin'ny loko telo eo amin'ilay saina.
Dia izay no nahatonga ny saina ho toa io fa nijanona kosa ilay fanononana ny loko ho MFM, maitso fotsy mena, satria ilay hevitra fonosiny mihintsy no tena manandanja fa tsy ny filaharany eo amin'ny kisary akory...
ora - 25/08/2014 09:00
Tena miombo-kevitra aminao za amin'izay hoe TOKONY TAZONINA HATRANY ilay FOMBA FANONONANA AZY HATRAMIN'IZAY fa manjary tsy manisy LANJA ANTSIKA MALAGASY ny fanovaovana ny fomba fanononana azy mantsy, misaotra e